Lacagta Neymar imisa laacib ayay gooysaa marka la eego sicirradii beri rikoodh jebiska ahaa???!! – Gool FM
(Roma) 03 Agoosto 2017 – Tan iyo 1982-kii, naadiyada Talyaaniga oo ahaa kuwa tillaabada u dhiga ciyaaraha caalamka waxay rikoodhka suuqa kala iibsiga jebiyeen 9 jeer, balse marna uma dhowayn qiimaha haatan lagu doonayo Neymar.
Laacibkan reer Brazil ayaa qarka u saaran inuu ku biiro kooxda Paris Saint-Germain oo Barcelona uga doonaysa €222m oo euro, taasoo dabcan 2 jeer ka badan rikoodhka haatan yaalla.
17 sano ayaa haatan laga joogaa markii ugu dambaysay ee ay Serie A jebiyaan rikoodhka dunida, balse intii u dhacaysay 1984 iyo 2000 waxay kooxaha Talyaanigu rikoodhka jebiyeen 9 jeer.
Haddaba hoos ka eeg inta laacib oo berigaa lagu heli karey lacagta haatan laga bixinayo Neymar oo qura?
1984: Diego Maradona – Napoli ka yimi Barcelona [€6.9m]
Diego Armando Maradona 2 jeer ayuu rikoodhka jebiyay, koowdii wuxuu kasoo tegey Boca Juniors oo uu ka aadey Barcelona kaddibna wuxuu usii dhaafay Napoli.
Neymar wuxuu gooyaa 13 Maradona:
1987: Ruud Gullit – PSV to Milan [€7.3m]
Gullit waxaa AC Milan keenay Silvio Berlusconi oo markaa kooxda iibsadey, isagoo jebiyay rikoodhkii hore, wuxuuna kaddib bilow dhib badan uu Gullit halyeey u noqday kooxda Rossoneri isagoo la qaaday 3 Scudetti iyo 2 European Cup.
Neymar wuxuu gooyaa 13 Gullit:
1990: Roberto Baggio – Fiorentina to Juventus [€8.3m]
Baggio markii uu kasoo tegayay Florence waxaa qaaquullo ka dhacday jidadka magaalada tiiyoo ay lacag rikoodh ah laacibka ku iibiyeen.
Il Divin Codino wuxuu kooxdiisa u dhaliyay 115 gool, 200 kulan oo uu u saftay Juve, isagoo la hantay UEFA Cup sanaddii 1993-kii iyo Serie A sanaddii 1995-kii.
Neymar wuxuu gooyaa 12 Baggio:
1992: Jean-Pierre Papin – Marseille to Milan [€12.5m]
Neymar wuxuu gooyaa 10 Papin:
1992: Gianluca Vialla – Sampdoria to Juventus [€13.4m]
Neymar wuxuu gooyaa Vialli:
1992: Gianluigi Lentini – Torino to Milan [€14.1m]
Neymar wuxuu gooyaa 8 Lentini:
1997: Ronaldo – Barcelona to Inter [€24.7m]
Neymar wuxuu gooyaa 6 Ronaldo:
1999: Christian Vieri – Lazio to Inter [€49m]
Neymar wuxuu gooyaa 4 Vieri:
2000: Hernan Crespo – Parma to Lazio [€55m]
Neymar wuxuu gooyaa 3 Crespo:
Barcelona oo ka hortimid go'aanka La Liga ay ku diideen in la burburiyo heshiiska Neymar